အရင်းအမြစ်များ / LED အသိပညာ
မိုဘိုင်း / WhatsApp:+86-13553831871 [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
စိတ်ကြိုက် LED Display ကို
Outdoor FK S စီးရီး
Outdoor FN M စီးရီး
Indoor Display S စီးရီး
ငှားရမ်း LED Display ကို
လုပ်ငန်းသုံး LED မျက်နှာပြင်
LED Display Module ပါ
LED Display ဗီဒီယို
ပင်မစာမျက်နှာ > အရင်းအမြစ်များ > LED အသိပညာ >
LED display အပိုဒ် အမျိုးအစားများ
LED display လုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လိုပါက ဤ LED display သတ်မှတ်ချက်များကို သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း COB ထုပ်ပိုးထားသော LED မျက်နှာပြင်များသည် အဘယ်ကြောင့် ပို၍ ပို၍ ရေပန်းစားလာသနည်း။
LED မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ ဤနည်းလေးပါးကို ကျွမ်းကျင်ပါ။
စိတ်ကြိုက် LED မျက်နှာပြင်သည် သုံးစွဲသူများကြား အဘယ်ကြောင့် ပို၍ရေပန်းစားသနည်း။
Ganzhou တွင် ပထမဆုံး သာမာန်မျက်လုံး 3D မျက်နှာပြင်ကြီးကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ LED ဖန်သားပြင်သည် မြို့တော်၏ အထင်ကရနေရာများသို့ နောက်ထပ် စွမ်းအားတစ်ခု ထပ်လောင်းပေးသည်။
LED မျက်နှာပြင်နှင့် OLED မျက်နှာပြင်ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
United States တွင် သေးငယ်သည့် LED မျက်နှာပြင်များ ဝယ်ယူသည့်အခါ ဘာကို ဂရုပြုသင့်သနည်း။
Sichuan ၏ ပထမဆုံး NBA အဆင့် ဘတ်စကက်ဘော အားကစားရုံသည် အားကစားနယ်ပယ်တွင် ခွန်အားတိုးစေရန် LED ဖန်သားပြင်များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ပြဿနာများကား အဘယ်နည်း။
ဖြုတ်တပ်နိုင်သော LED မျက်နှာပြင်၏ထူးခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။
စက်ရုံလိပ်စာ- No.2505, Songbai Road, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
1. LED အလင်းအမှောင် အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒက်များ၏ တောက်ပမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် တောက်ပသောပြင်းထန်မှု (Luminous Intensity) ဖြင့် ဖော်ပြသည်၊၊ ယူနစ်မှာ candela cd; 1000ucd (microcandela) = 1 mcd (millicandela), 1000m...
ပြင်ပကြော်ငြာစခရင်များမှ ကွန်ဖရင့်ဗီဒီယိုပြသသည့်စက်များအထိ ပြင်ပကြော်ငြာစခရင်များမှသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် အလွန်အသုံးများသော display ထုတ်ကုန်တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ LED မျက်နှာပြင်များ အားလုံးအတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာ...
ဦးဆောင်ပြသမှုဟာ မွေးကတည်းက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အာရုံစိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တပ်ဆင်နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ၎င်းကို စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် အသိအမှတ်ပြု အသုံးချခဲ့သည်။ ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ LED display စျေးကွက်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး ဈေးကွက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုင်းခြားခဲ့သည်။ သမားရိုးကျ LED Display ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြသော်လည်း...
Ganzhou တွင် ပထမဆုံး သာမာန်မျက်လုံး 3D မျက်နှာပြင်ကြီးကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ LED ဖန်သားပြင်သည် th တွင်နောက်ထပ်တွန်းအားတစ်ခုထပ်လောင်းသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က၊ Jiangxi ပြည်နယ်၊ Ganzhou ရှိ super urban complex တစ်ခုဖြစ်သည့် Xingrun International Project မှ ဖန်တီးထားသည့် 300㎡ သာမန်မျက်စိဖြင့် 3D display screen ကို အောင်မြင်စွာ ထွန်းညှိနိုင်ခဲ့သည်။ ▲ ကိုယ်လုံးတီး-မျက်လုံး 3D ဧရာမမျက်နှာပြင် (...
ကျွန်ုပ်၏ Wufoo ဖောင်ကိုဖြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ P2၊ p2.5 Fine-Pitch ဦးဆောင်သည့် မျက်နှာပြင်၊ P3၊ P4၊ p4.81၊ P5၊ P6၊ P8၊ P10 ရောင်စုံ HD LED မျက်နှာပြင်၊stage အငှားစီးရီး LED မျက်နှာပြင်အတွင်းခန်း LED မျက်နှာပြင်များနှင့် ပြင်ပစီးရီး LED မျက်နှာပြင်၊ သင့်အား အရည်အသွေးမြင့်၊ မြင့်မားသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော LED display ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက LED full-colour display engineering ထုတ်လုပ်မှု၊ indoor series LED display, outdoor series LED display, stage အငှားစီးရီး LED display, floor tile interactive LED display, transparent screen, etc. JYLED တွင် တည်ငြိမ်သော အရည်အသွေး ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အားသာချက်များ၊ ရုပ်ပုံ၊ ရောင်စုံအရောင်စုံ၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်း။
JYLED sitemap ဆောင်းပါးစာရင်းကိုကြည့်ပါ-
JYLED Html| JYLED ဆိုက်
Mini LED ရုပ်ထွက် Fine-Pitch ဦးဆောင်သည့် မျက်နှာပြင် Led Display မျက်နှာပြင်